राष्ट्रनिर्माताकै सिद्घान्तमा विश्व – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
राष्ट्रनिर्माताकै सिद्घान्तमा विश्व
२०७० माघ १, बुधबार ०४:०७ गते
जसरी लेखको आशय बुझ्न सुरूदेखि अन्त्यसम्म पढ्नुपर्दछ, त्यस्तै इतिहासको न्यायोचित विश्लेÈण गर्न पनि यसको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । इतिहास राष्ट्र र राष्ट्रका नागरिकको परिचय हो । इतिहासले राष्ट्र र नागरिकको अस्तित्वको परिचय दिएको हुन्छ । विश्वमा हाल अस्तित्वमा रहेका देशहरुमध्ये पुरानो देशहरुको सूचीमा पर्ने हाम्रो देश नेपाल भौगोलिक रुपमा मात्र होइन, सांस्कृतिक र सभ्यताको दृष्टिले समेत अत्यन्त प्राचीन र गौरवपूर्ण रहेको कुरा नेपालको इतिहासको गहिरो अध्ययन र खोजले मात्र बुझाउन सक्दछ । इतिहास एउटा खोजको विÈय पनि हो । विश्व इतिहासको अध्ययन गर्दा नेपाल राष्ट्रको इतिहास पृथक् रहेको पाइन्छ । विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरु कुनै न कुनै रुपमा उपनिवेश बन्दाको समय कालमा समेत स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा रहन सफल नेपाल राष्ट्रको इतिहास विश्व मानचित्रमा एउटा उदाहरणीय विÈय हो ।
कहिल्यै घाम नअस्ताउने गरी विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरुमा साम्राज्य खडा गरेको बेलायतले नेपालस“ग सीमा जोडिएको देश भारतलाई समेत आफ्नो उपनिवेश बनाई शासन जमाइसकेको थियो । नेपाल इतिहासमा कहिल्यै कसैको पनि उपनिवेश बन्न नपर्नुको कारण विदेशी साम्राज्यवादीहरुको नेपाललाई उपनिवेश बनाउने र नेपालीमाथि पनि शासन गर्ने चाहना नै नभएकोले होइन । नेपाललाई पनि उपनिवेश बनाउने बेलायती साम्राज्यको पटकपटकको प्रयासलाई हाम्रा पुर्खाहरुको बुद्घिमत्तापूर्ण निर्णय र बहादुरीपूर्ण प्रतिकारले परास्त गरेका कारण नेपाल आजसम्म कसैको उपनिवेश बन्न नपरेको हो । र, त्यसैमा हामी नेपालीले गर्व गर्न पाएका हौ“ । यस्तो गौरवपूर्ण इतिहास निर्माण गर्ने पुर्खाहरुको अपमान र उनीहरुको भूमिकालाई अवमूल्यन गरेर हामीले आफ्नो राष्ट्रिय परिचय र इतिहासप्रति गौरव र सम्मान गरेको ठहर्दैन । प्रसंग नेपाल राष्ट्रका निर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको हालै गएको जन्मजयन्ती, अर्थात् राष्ट्रिय एकता दिवसको हो ।
विगत सात÷आठ वर्Èयता नेपाल राष्ट्रको एकीकरण अभियानका विभिन्न पात्रहरुमध्येका एक अगुवा श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने गरेको पाइन्छ । उनको एकीकरण अभियानलाई राष्ट्रिय स्वार्थ नभएर व्यक्तिगत स्वार्थका कारण नेपालको एकीकरण नभई गोर्खा राज्यको विस्तार गरेको भनी व्याख्या गर्नेहरु पनि आजकल प्रशस्तै भेटिन्छन् । यस्तै, बहकाउमा परी २०६३ सालयता राष्ट्रिय एकता दिवसलाई राज्यद्वारा मान्यता नदिई सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने कोसिस त्यसबेला सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेतृत्वले ग¥यो ।
त्यहा“माथि एकीकरण अभियानका अगुवा भनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्बोधन गर्दा केहीको मनमा तत्काल यस्ता कुरा उब्जिएका होलान् ः ‘उनी त एक विस्तारवादी थिए । उनले ठूलो राज्यको राजा हुने व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भएर आफ्नो राज्य गोर्खाको विस्तार गरेका थिए ।’ यदि यस्तो सोच मनमा उब्जिएको छ भने एक पटक यसरी पनि सोचौ“ न । गोर्खाको विस्तार गरेको भए किन आफूले विजय हासिल गरेका राज्यलाई गोर्खामा विलय गराएनन् ? यदि गोर्खा राज्यलाई ठूलो राज्य बनाउने चाहना थियो भने उनले नेपाल नामकरण नगरेर गोर्खा नै कायम राख्नुपर्ने होइन र ? बरू, उनले आफ्नो “गोर्खा” राज्यको नाम नै मेटाएर विजय हासिल गरेका सबै राज्यहरुलाई साझा नाम “नेपाल” दिए । पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान सुरू गर्नुभन्दा धेरै वर्Èअगाडि नै नेपाल भन्ने राष्ट्र थियो भन्ने कुरालाई विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरुमा उल्लेख भएको “नेपाल” नामले पनि पुष्टि गर्दछ । ती धार्मिक ग्रन्थहरु पृथ्वीनारायणले एकीकरण अभियान सुरू गर्दाको समयको त कुरै छोडौ“, उनी जन्मिनुभन्दा धेरै वर्Èअगाडि लेखिएका हुन् । न त उनका दिव्य उपदेशमा कही“कतै गोर्खा राज्य भेट्न सकिन्छ । उनको दिव्य उपदेश अध्ययन गर्ने हो भने गोर्खा नाम कही“कतै नलिई नेपाल नै भनेको पाइन्छ । यदि गोर्खाको विस्तार नै गर्न चाहेका थिए भने त्यत्रो युद्घ नै जितेका उनलाई नेपालको सट्टा गोर्खा नै नामकरण गर्न कसले रोक्न सक्थ्यो र ? ल अब सोचौ“, आफ्नो गोर्खा राज्यको नाम, निसाना नै मेटाएर समग्र भूभागलाई नेपाल भन्नुले गोर्खाको विस्तार गरेको बुझिन्छ कि नेपालको एकीकरण ? यस ऐतिहासिक ज्ञानको कमीका कारण सायद हामीमध्ये केहीको मनमा नेपालको एकीकरण नभएर गोर्खाको विस्तार गरेको जस्तो भ्रम पर्न गएको हुन सक्छ, या त आधुनिक बन्ने होडमा आएको जोशको ज्वालाले आफूसँग भएको ज्ञानलाई नै जलाइदिएको हुन सक्छ । नेपालको एकीकरण र विस्तारबारेको भ्रम मेट्न नेपालको इतिहासको मात्र होइन, धार्मिक ग्रन्थ र पुराता¤िवक वस्तुहरुका बारेमा पनि चासो राख्नुपर्दछ । जहा“सम्म व्यक्तिगत मह¤वाकांÔाको कुरा छ, त्यो सबै मानव जातिमा हुने कुरा हो । यदि पृथ्वीनारायण शाहमा नेपाल एकीकरण गर्ने सोच नआइदिएको भए हामी बेलायतीहरुबाट शासित हुनेथियौ“ । के त्यो हाम्रा लागि ठीक हुन्थ्यो त ?
यदि एकीकरणको सोच अर्को कुनै राज्यका राजामा आएको भएता पनि तिनै राजाले एकीकरणको जस पाउने थिए । तर, पृथ्वीनारायणमा त्यो सोच आयो र सोहीअनुसार एकीकरण पनि गरे । उनकै सोच र प्रयासले उनकै अगुवाइमा निर्माण गरिएका विभिन्न राज्यहरुको एकीकृत स्वरुप “नेपाल” हुनुको जस पृथ्वीनारायण शाहलाई नदिए कसलाई दिने ? व्यवस्था परिवर्तन गर्नुभन्दा ठूलो योगदान राष्ट्रनिर्माण गर्नु हो । शासन व्यवस्था परिवर्तन हु“दैमा राष्ट्रनिर्माता परिवर्तन भएको हु“दैन ।
विश्वका सबै देशमा आफ्नो राष्ट्रको निर्माण कार्यमा योगदान पु¥याउने व्यक्तित्वलाई कुनै न कुनै रुपमा सम्मान दिएकै छन् । हामीले अझै गम्भीर भएर नजिकैको छिमेकी देश भारतलाई नै हेरौ“ न । सदियौ“देखि बेलायतीहरुको उपनिवेश बन्दै आएको र उनीहरुकै शासन खेप्दै आएको भारतलाई स्वतन्त्र बनाउने अभियानका अगुवा महात्मा गान्धीलाई भारतीयहरु कति सम्मान दिन्छन् ? उनीहरुको मुद्रामा समेत गान्धीकै तस्बिर रहेको हामीले देखेकै छौ“ । त्यतिमात्र होइन, हामी नेपालीलाई पृथ्वीनारायणको सालिक ढाल्न उक्साउने नेताहरु उच्च ओहोदामा पुगेपछि भारत भ्रमणमा जा“दा गान्धीको सालिकमा माल्यार्पण गरी गान्धीको गौरव गाथा गाउ“छन् । गान्धी भारतलाई बेलायती औपनिवेशबाट मुक्ति दिलाउनको निम्ति भएको “भारत छोड्” आन्दोलनका अगुवा हुन् भने पृथ्वीनारायणले नेपाललाई बेलायतको उपनिवेश बन्नबाटै रोकेका हुन् ।
हिमाली खण्डमा रहेका राज्यको सीमा व्यवस्थित र निश्चित नभए अंग्रेजले सबै राज्यलार्ई बेलायती शासनभित्र विलय गराउ“छन् भन्ने पृथ्वीनारायणले बुझेका थिए भन्ने कुरा उनको दिव्य उपदेशमा पाइन्छ । हामी नेपालीका पुर्खाले जत्तिकै चातुर्यता भारतीयका पुर्खाले पनि देखाउन सकेका भए सदियौ“सम्म विदेशीको शासनबाट भारतीय जनता पिल्सिरहनु पर्ने थिएन । नेपालको एकीकरण अभियानमा गोर्खाली फौजले आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य युद्घको समेत सामना गर्नुप¥यो । आन्तरिक युद्घसँगै आधुनिक हतियारसहितको बेलायती फौजसँगको युद्घमा समेत विजय प्राप्त गर्नु सामान्य कुरा थिएन । हाल नेपाली सेनाको के काम छ ? यसले कुन देशको सेनासँग युद्घ लड्न सक्छ भनेर आफ्नै राष्ट्रको रÔक शक्तिको अवमूल्यन गर्नेहरुले त्यसबेला आधुनिक हतियारसहितका बेलायती फौजलाई खुकुरी र ढालको भरमा लडेर जित्न सकेको इतिहास सम्झनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, पृथ्वीनारायणको दृढ संकल्प र उनका भाइ, भारदारको इमानदार प्रयासबाट त्यो सम्भव भएको थियो भन्ने कुरालाई पनि बुझ्न सक्नुपर्छ । नेतृत्व तहमा दृढता र राज्यका सबै अंगमा इमानदारिता हुने हो भने अहिले पनि केही असम्भव हु“दैन भन्ने कुरालाई मनन् गर्नुपर्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले बलको प्रयोगले अर्को राज्यलाई दबाएका हुन् भन्ने विश्लेÈणहरु पनि केही वर्Èयता सुन्नमा आएका छन् । हो, युद्घमा बल प्रयोग गरेरै विजय हासिल गरेका हुन् । तर, पशुको समेत बा“च्न पाउने अधिकारको वकालत गरिने अहिलेको समयमा आएर झन्डै अढाई सय वर्Èअगाडिको विश्लेÈण गर्दा समय सन्दर्भलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो बेलाको विश्वलाई हेरेर विश्लेÈण गर्दा हतियारमार्फत बल प्रयोग गर्नु कुनै नौलो कुरा थिएन । भारतमा स्वतन्त्रताको निम्ति भएको भारत छोड् आन्दोलन र नेपालको एकीकरण अभियानका बीचमा कति वर्Èको अन्तर छ भन्नेबारेमा पनि एक पटक गम्भीर भएर सोचौ“ । झन्डै अढाई सय वर्Èअगाडि हतियारको प्रयोग गरेको कुरालाई मात्र नहेरी एकीकरणमा सकेसम्म कम युद्घ गर्नु परोस् भनेर उनले विभिन्न राज्यमा लगाएका मितेरी साइनो र नाता सम्बन्ध जोडेका कूटनीतिक चातुर्यतालाई पनि सम्झौ“ न । त्यो समयमा उनले अपनाएका कूटनीतिबाट हामीले पनि केही शिÔा लिने कि ?
“प्रजा मोटा भया दर्बार बलियो रहन्छ”, भन्ने उनको दिव्य उपदेशले उनी प्रजातान्त्रिक थिए भन्ने पुष्टि गर्दछ । “खानी भयाका ठाउ“मा गाउ“ भया पनि गाउ“ अरु जग्गामा सारिकन पनि खानी चलाउनु”, “ग्रहो बन्या जग्गामा घर भया पनि घर अरु जग्गामा सारी कुलो काटी खेत बनाइ आवाद गर्नु” भन्नुले व्यवस्थित रुपमा बस्ती बसाउने, अनि निश्चित औद्योगिक Ôेत्र छुट्याउने र उर्बर भूमिमा खेती गर्ने भन्ने अहिलेको आधुनिक युगको मान्यता हाम्रा राष्ट्रनिर्मातामा अढाई सय वर्Èअगाडि नै थियो भन्ने पुष्टि गर्दछ । उनको सिद्घान्त र मान्यता अहिले विश्वव्यापीकरण भैसकेको छ । विश्वभरका मानवजातिले नै सम्मान गर्नलायक श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी नेपालीले सम्मान गर्न हिचकिचाउनु पर्ने कुनै कारण नै छैन ।